संसदबाट निस्कँदा गगनका गोजीभरि डाक्टर सरुवाका चिर्कट
बैशाख १३, २०७४ बुधवार १५:००:०० प्रकाशित
काठमाडौं– बुधबार स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा संसदबाट हतार–हतार निस्कँदै थिए। मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको वार्षिकोत्सवमा पुग्न हतार थियो उनलाई। उनीसँग कुरा गर्ने समय नपाएपछि सांसदहरुले उनलाई कागजका चिर्कटो थमाए।
उनले १०–१२ जनाका कागज लिन भ्याए। उनलाई लागेको थियो, सांसदहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि केही सुझाव दिए होलान्। तर, बाटोमा खोलेर हेर्दा उनले थाहा पाए ती त सबका सब डाक्टरलाई उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौँ सरुवा गर्नुपर्ने सिफारिस पो रहेछन्। उनले यो रहस्य खोले, मनमोहनकै वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा वक्तव्य दिँदै गर्दा।
उनले चिर्कटो मध्येको एउटाको उदाहरण दिँदै भने, ‘हामीले एक जना डाक्टरलाई रौतहट पठाएका थियौँ। तर, उहाँलाई काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पताल ल्याउनुपर्‍यो भनेर सिफारिस गरिएको रहेछ।’ उनले सिफारिसको बेहोरामा उल्लेखित कुरा भने, ‘उहाँ साह्रै राम्रो डाक्टर हो, किन रौतहट पठाइएको? काठमाडौँमै ल्याउनुपर्छ।’ उनले कार्यक्रमको मञ्चबाटै सांसदलाई प्रश्न गरे, ‘रौतहटका जनताले राम्रो उपचार पाउन हुँदैन र? उपत्याका बाहिर राम्रा डाक्टर गए पो त्यहाँ राम्रो सेवा पाइन्छ।’
मन्त्री थापाले उपत्यका बाहिर उपचार सेवा विस्तार पनि गर्नुपर्छ भन्ने र आफ्ना डाक्टरलाई काठमाडौँमै राख्नुपर्छ पनि भन्ने दोहोरो मानसिकता त्याग्न सबै नेतालाई आग्रह गरे। रौतहटलाई उदाहरण दिँदै त्यहि प्रवृत्ति सर्वत्र देखिएको उनले बताए। मन्त्री थापाले विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुँदा उपत्यका बाहिर सेवा विस्तारमा जटिलता आएको बताएका थिए।
विशेषज्ञ चिकत्सकको अभाव चिर्ने कोसिस गरिरहेको बताउँदै भने, ‘हामी अञ्चल अस्पतालहरुमै विशेषज्ञ चिकित्साको पढाइ सुरु गर्ने प्रयासमा छौँ। हामीलाई ३३ सय विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक छ। अहिले ६ सय जना मात्रै छन्।’
विशेषज्ञ उपचार सेवा उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित भइरहेको बताउँदै मन्त्री थापाले मनमोहन सेन्टरलाई पनि उपत्यका बाहिर सेवा विस्तारबारे सोच्न आग्रह गरे।
१. पर्शुराम श्रेष्ठ ११औं तहमा बढुवा, चूडामणि भण्डारी १०औंमा घटुवा
२. राष्ट्रकवि घिमिरको हाइकेयर युनिटमा उपचार हुँदै : नेपाली राजदुतावास
३. काठमाडौंमै भेटियो बर्डफ्लु, हाँस-कुखुरा नष्ट गरिँदै
४. विश्व थाइराइड दिवसः नियमित औषधिले निको हुन्छ रोग
५. डडेल्धुरा: अमरगढीका २६ जना बालबालिकामा देखियो कडा कुपोषण
६. सरकारलाई गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको प्रश्न– हामीले ५ हजार भत्ता कहिले पाउँछौं?
७. बिरामी एन्जिला शाहलाई ठकुरी समाज कोरियाको १ लाख ८० हजार सहयोग
८. सरकारका सय दिन : स्वास्थ्यमा दोहोरियो कर्मचारी ‘सरुवा’को प्रकोप
९. सरकारका १०० दिन : यी हुन् स्वास्थ्य मन्त्रालयले दावी गरेका १० उपलब्धि
१०. के हो थाइराइड परीक्षण, कसले गराउने ?
३. उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ वीर अस्पताल भर्ना
५. अस्पतालमै नर्समाथि अन्धाधुन्ध चक्कु आक्रमण [भिडियो]